Khasaaraha Weerarkii Masjidka Al-Hidaaya ee Nairobi oo Sii kordhay | Codka Bulshada Media Network	Sunday, May 19th, 2013	Home
Khasaaraha Weerarkii Masjidka Al-Hidaaya ee Nairobi oo Sii kordhay
Published on December 8, 2012 by admin · No Comments
Laba qof oo hor leh ayaa u dhintey dhaawacyadii soo gaarey qaraxii lagu weeraray meel u dhaw masjidka al-Hidaaya magaalada Nairbi, taas oo dadka ku dhintey ka dhigeysa shan qof, amaanka ayaa aad loo adkeeyey magaalada Nairobi iyada oo doorashooyinka Kenya ay ka harsan tahay saddex bilood oo keliya.
“laba qof oo horleh ayaa ku dhintey isbitaalka, dhimashaduna hadda waa shan qof” sidaas waxaa warbaahinta AFP u sheegay Madaxa Booliska magaalada Nairbo Moses Nyakwama.
Bobka gacanta laga tuuro ayaa lagu dhuftey meel wax yar u jirta Masjidka al-Hidaya, salaada cishaha kadib maalintii shalay ee Jimcada ahayd, halkaas oo dadku aad ugu badnaa, sida laga soo xiganayo Booliska iyo dad goobjoogayaal ahaa.
Booliska ayaa sheegay in ay u direen xaafadda Islii ciidamo boolis ah oo badan, si loo sugo amaanka sidaas waxaa yiri madaxa Booliska Nairobi.
Booliska ayaa kala cayriyey dhalinyaro caraysan oo jidadka isugu soo baxay fiidnimadii xalay (Jimce), si ay u muujiyaan carada ay ka qabaan.
Qaraxan ayaa ka dhacay xaafadda Islii ee ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah, waxaana uu imaanaya xili maalintii Arbacada 5/12/2012 qarax miinada dhulka lagu aaso ah ay ka dhacdey Islii waxaa ku dhintey hal qof halka ay ku dhaawacmeen sideed kale, sidoo kale todobaadyo ka hor ayey ahayd markii Bas nooca rakaabka ah lagu qarxiyey isla xaafadda Islii ee Soomaalidu ku badan tahay kaas oo ay ku dhinteen 9 qof dhaawacuna gaarey in ka badan 25 qof.
Dalka Kenya ayaa dhibane u noqdey weerarada cayn kan oo kale ah tan iyo markii ciidmadoodu galeen gudaha Soomaaliya sanadkii 2011 bishii Oktoober, waxaana ay masuuliyadda qaraxyadan dusha uga tuuraan xarakada al-Shabaab ee Soomaaliya ka dhisan.
Xarakada al-Shabaab ayaa iska fogeeyey masuuliyadda qaraxyadan waxayna ku tilmaameen kuwo la xiriira doorashooyinka Kenya ee ay ka hasran tahay wax ka yar saddex bilood, sidoo kale al-Shabaab ayaa sheegay in qaraxyadan lagu doonayo in wax loogu dhimo dadka Muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka Kenya. Inkasta oo al-Shabaab horey wacad ugu mareen in ay gudaha Kenya qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin ah ka fulin doonaan.